Gorfaynta buugga Dabinkii Jiraalka - Diblomaasi
Related Topics:FalanqeynGorfaynta buugga Dabinkii JiraalkaVideo
Iswiidhan waxay rabtaa in booliska Noorwey ay yimaadaan dalkeeda.
Waa qoraa ka tirsan Somalism. Qoraaga waa akhriste qaangaadh ah. Qoraa qalinka ku xarragooda, faalleeya dhiganayaasha ku qoran afafka Soomaaliga, Carabiga iyo ingiriisiga. Sida oo kale wax ka qora arrimaha la xidhiidha Sooyaalka Islaamka iyo ta qofafka.